Yaa jabiyay CC SHAKUUR doorashadii madaxweynaha? - Caasimada Online
Home Warar Yaa jabiyay CC SHAKUUR doorashadii madaxweynaha?
Yaa jabiyay CC SHAKUUR doorashadii madaxweynaha?
Muqdisho (Caasimada Online) – Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo kamid ahaa xubnihii filashada badan laga qabay doorashada madaxweynaha Soomaaliya ayaa kamid noqday xubnihii ku haray wareegii hore ee doorashada madaxweynaha.
Waxay kamid aheyd dhacdooyinkii loogu yeeray ‘lama filaankii doorashada ee dhanka hoose.’
Cabdiraxmaan oo ahaa mucaaradka ugu weyn ee Farmaajo kasoo horjeeda ayaa dhinaca kale wuxuu shaqo muuqda ka qabtay dhinacyada dadweynaha, ganacsatada iyo saaxiibada dibadda, laakiin dariiq ay isaga iyo beeshiisa isaga soo dhaceen maalmihii u dambeeyey ee doorashada madaxweynaha oo loo arkayey faa’ido u soo korortay ayaa dhinaca kale loo akhriyey dhibaato soo deg degtay.
Kacdoon dhashay 72 saacadood ka hor doorashada madaxweynaha, kaas oo dabasocday soo jeedin markii hore la sheegay inay ka timid ra’isul wasaare Rooble iyo hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor ayey dadka qaar filayeen inay Cabdiraxmaan ka saacidi doonto natiijo buuran.
Kulamo kala duwan oo Rooble iyo Qoor Qoor lala yeeshay doorashada ka hor waxaa ku jirtay kalmad la yiraahdo hal musharax xoogiina isugu geeya.
Ganacsatada beeshaas ayaa sidoo kale soo jeedisay in hal qof la dhiso. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo loo arkayey kan ugu fursadda badan ayaa dhowr musharax oo ay ku jireen Cabdikariin Xuseen Guuleed iyo Dr. Cabdinaasir Cabdulle u tanaasuleen iyadoo markaas kadibna ay ganacsato siisay gacan maaliyadeed.
Hase yeeshee Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame wuxuu ku haray wareegii koowaad ee doorashada madaxweynaha isagoo helay 15 cod.
Hadda waxaa aad la isku weydiinayaa cidda jabisay Cabdiraxmaan?
Kooxdiisa ololaha oo aan la hadalnay waxay toos eedaan dusha uga saarayaan hoggaamiyaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor iyo Ra’isulwasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Kaliya maahan inay diideen inay Cabdiraxmaan dhisaan, balse waxay toos ula dirireen dhammaan kanaaladii uu codadka ka heli karay sida ay kooxdiisa sheegtay.
Qoor Qoor wuxuu dhisayay Farmaajo, wuxuuna qorshaha labaad ka dhigtay Shariif Sheekh Axmed, waxaana la sheegay in xildhibaanada ka diida inay Farmaajo codka siiyaan uu ku qalqaalinayey inay Sheekh Shariif siiyaan. Rooble isagu bannaanka ayuu u taagnaa Xasan Sheekh.
Kooxda ololaha ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaa laga soo weriyey in xilldhibaano go’aansaday inay codka isaga siiyaan in Qoor Qoor iyo Rooble ay soo dhex galeen oo ay badaleen kuna xireen musharixiin kale, taas oo burburisay halgankii Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee soo socday 5-ta sano, waa sida ay kooxdiisa ku doodeyso.
Lama yaqaano waxa ay sidaan u sameeyeen, laakiin dadka qaar waxay leeyihiin waxay aaminsan yihiin inuu dili lahaa fursadooda dambe ee siyaasadda, haddii uu soo bixi lahaa Cabdiraxmaan.
Suurtagal maaheyn inuu natiijo fiican keeno musharax ay la dagaalamayaan labadii siyaasi ee ugu sareysay beeshiisa ayey leeyihiin falanqeeyaashu.
Inkastoo aanan Cabdiraxmaan Cabdishakuur si gaar waxba uga weydiinin sababihii jabiyey iyo waxa uu qorsheynayo mustaqbalka dhow, hadana kooxdiisa ololaha waxay noo sheegeen in arrintaan si weyn la isaga wareystay dhowrkii cisho ee lasoo dhaafay oo ay tuhuno badan jiraan.
Xagga dadweynaha arrintani waxay aheyd dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay mid kamid ah hadalheynta ugu weyn ee siyaasadda Soomaaliya.